Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka oo lagu wareejiyay Qormada Labaad ee Dastuurka – Kalfadhi
Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka oo lagu wareejiyay Qormada Labaad ee Dastuurka
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee BJFS Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa waxaa ay guddoomeen nuqul ah qormada labaad ama daraafka labaad ee Dastuurka oo dhammeystiran.
Guddiga dib u eegista, la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee Baarlamaanka iyo Guddiga dastuurka ee madaxa banaan, oo kulan la yeeshay guddoomiyeyaasha ayaa ku wareejiyay qormada labaad ee Dastuurka, horraantii bishan.
“Waxaa ay soo bandhigeen oo ay ku wareejiyeen labadda guddoomiye mid walba nuqul ah qormada labaad ama daraafka labaad ee Dastuurka oo dhammeystiran. Waxaa ay ka codsadeen guddoomiyeyaasha in ay hirgelliyaan qaraarka ansixinta. Marka Baarlamaanka uu ansixinayo waxaa la maraa qaabab kala duwan, qaababkaasi ayaa la rabaa in ay Baarlamaanka ay ansixiyaan”, ayuu yiri Xoghayaha guud ee Golaha Shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux.
Guddoomiyaasha labada Aqal ayaa labada gudi uga mahad celiyay howsha adag ee ay hayaan iyo sida ay uga go’antahay In dastuurka la ansixiyo bisha June ee sanadkan.
Labada gudi ayaa guddoonka Baarlamaanka uga warbixiyay howsha dib u eegista dastuurka halka ay mareyso,waxaana ay guddoonka labadiisa Aqal ku wareejiyeen Qormada Labaad ee dastuurka.
Dastuurka ayaa la filayaa in dhawaan Baarlamaanka la horgeeyo, kaddiba ay ka doodaan.
Wasiir Oomaar “Sharcigan waa Dastuurkii lagu dhaqi lahaa hay’adda duulista rayidka Soomaaliyeed”
Xildhibaannada federaalka ee kasoo jeeda Puntland oo sheegay in la xaliyay tabashadii maamulka Puntland